Wasiir looga guuleystay doorashada Aqalka hoose oo ka hadlay sida ay wax u dhaceen (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wasiir looga guuleystay doorashada Aqalka hoose oo ka hadlay sida ay wax u dhaceen (DHAGEYSO)
Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Khaalid Cumar Cali oo wareysi siiyay mid ka mid ah idaacadaha Muqdisho ayaa sheegay in doorashada xubnaha Koonfur Galbeed u mataleeysa Aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ee isaga looga guuleystay ay aheyd mid ku dhacday si musuq-maasuq ah.
Doorashadaasi oo ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayuu wasiiru dowlaha ku sheegay in magaciisa looga been abuuray, islamarkaana dadkii codeeyay doorashadaasi ku tilmaamay inay ahaayeen dad meelo kala duwan laga keenay balse aanu ahayn xubnihii uu gudbiyay ugaaska beeshiisa.
Sidoo kale, wasiiru dowlaha ayaa sheegay in isagoo sugaya inuu u tartamo doorashadaasi uu halmar ka warhelay in kursigiisa uu qof kale u tartamayo, isagoona arrintaasi ku eedeeyay in guddiga doorashada Koonfur Galbeed, aysan dhex dhexaad ka aheyn doorashada ka socoto magaalada Baydhabo.
Dhinaca kale, hadalka wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Khaalid Cumar Cali ayaa imaanaya xilli la sheegayo in musuq-maasuq baahsan uu ka dhex jiro doorashooyinak ka dhacaayo magaalooyinka maamul goboleedyada dalka, iyadoona doorashadaan ay tahay mid ka duwan tii sanadkii 2012-ka dhacday.
Ugu dambeyn, wasiirka ayaa sheegay inuu dacwadiisa u gudbin doono cidda ay quseeyso islamarkaana uusoo bandhigi doono cadeymo ku aadan in musuq-maasuq baahsan lagu sameeyay ergooyinkii saxda ahaa ee isaga soo dooran lahayd.